Nagarik News - बन्दीपुरमा नृत्यमग्न पर्यटक
होमपेज / शुक्रबार / बन्दीपुरमा नृत्यमग्न पर्यटक
बन्दीपुरमा नृत्यमग्न पर्यटक	03 May 2013 शुक्रबार २० बैशाख, २०७०
समुद्र पौडेल	Be the first to comment! 12345 (3 votes)
शुक्रवार साँझ पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा पर्यटकहरूले जमेर नाचे। अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम, जापानलगायतका विश्वका ६२ भन्दा बढी देशका पर्यटक एकैठाउँमा जम्मा भएर नाचे। यो रमाइलो चार दिनसम्म चलेको थियो। युनिभर्सल रिलिजन बन्दीपुर म्युजिक फेस्टिभलमा शुक्रवार साँझ ५ बजे संगीतको धुन सुुरु भएपछि पर्यटकहरू रमाउँदै नाच्न थालेका थिए। कोही नाच्दै थिए, कोही हातमा बियर बोकेर डुल्दै थिए। नाच्न पाएकामा भारतका सुबोधकुमार सिंघा र उनकी श्रमिती सराभी सिंघाले रमाइलो अनुभूति गरिरहेका थिए। सराभीले भनिन्, 'बन्दीपुर स्वर्गभन्दा कम छैन। अहिले हामी स्वर्गमै छौँ भन्ने अनुभव गरिरहेका छौं। एउटै थलोमा विभिन्न देशका संगीतको मजा लिन पाइएको छ।' नेपाल भ्रमण गर्न साथीहरूसँग एक महिनाअघि नेपाल भित्रिएका आठ इजरायली नागरिक म्युजिक फेस्टिभलमा रमाए। सिल ओभाडिलले भनिन्, 'नेपाल घुम्न पनि पाइयो, संगीतमा झुम्न पनि पाइयो।' म्युजिक फेस्टिभल पर्यटन प्रवर्द्धनको राम्रो माध्यम भएको आयोजक मध्येका एक सन्तोष गोचरले बताए। 'करिब सात सय पर्यटक भिœयाउने योजना बनाएर कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ,’ उनले भने, 'पहिलो दिनमै एक हजारभन्दा बढी पर्यटक सहभागी भएका छन्।’ Tweet Leaveacomment Message *
मेरा फ्यान, मेरा भगवान्स्वरूपराज आचार्यका धेरै गीत लोकप्रिय छन्। उनी आधुनिक, गजल, पप, भजन गरी थुप्रै प्रकारका गीत गाउँछन्। उनका फ्यान पनि थुप्रै किसिमका छन्। अनेक थरी फ्यानलाई 'झेलेका' छन् उनले। कतिपय फ्यानप्रति...	कस्तो करामत?प्रदर्शनको पालो पर्खेको फिल्म 'करामत'ले हलमा लागेपछि करामत देखाउला/नदेखाउला, फिल्म रिलिज नभई त्यो भन्न सकिने कुरा होइन। तर, फिल्ममा केही न केही 'करामत' देखाइएकै छ भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार देखिएका...	रेसम फिलिली अभिनेत्री भन्छिन् : 'म टोटल्ली केटी पाराको छैन'अभिनेत्री मेनुका प्रधानले 'भिसा गर्ल', 'भिजिलान्ते थ्रीडी', 'एक दिन एक रात', 'झिग्राना' लगायत फिल्ममा अभिनय गरिन्। थुप्रै नाटकमा अभिनय गरिन्। म्युजिक भिडियोमा पनि देखिइन्। फिल्मकर्मीमाझ उनको कामको प्रशंसा भइरहे पनि...	भूकम्प संयोगदुईचार दिनदेखि नराम्रो सपना देखिरहेको थिएँ। बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै अलि पर पुगेपछि बाटो नै नहुने। पुल तर्न खोज्दा पुलै गायब हुने। ओरालो–ओरालो झरिरहेको हुने। यस्ता सपनाले अनिष्टको संकेत गर्छन् भन्ने जनकथन...	भन्न खोजेको के?विवाह नगरे पनि श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र श्वेता खड्का 'जोडी'कै रूपमा चिनिन्छन्। फिल्मदेखि व्यवसायसम्म सहकार्य गरिरहेका उनीहरूले सम्बन्धलाई औपचारिकता मात्रै दिन बाँकी रहेको बताइन्छ। शनिवार एक कार्यक्रममा यो जोडी सँगै देखियो।...	अस्वस्थ देश, मौन दलआमरण अनशन बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा माफियाका कारण देश, नागरिक र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(आईएमओ) को बिग्रिएको स्वास्थ्यको बढी चिन्ता छ। मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन लिन आईएमओमा गर्ने आर्थिक...	कोरियामा कामदारको बेहालरोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान नेपालबाट हजारौँ युवा तछाडमछाड गरिरहेको समयमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कोरियामा रहेका आप्रवासी कामदारको अँध्यारो पाटोलाई सार्वजनिक गरेको छ।	सशस्त्र प्रहरीको संकट वर्षवैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पपछि खोज तथा उद्धारमा प्रभावकारी खटाइले अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीले वाहवाही पायो । भग्नावशेषमा पुरिएकाको खोजीमा सघाउन आधुनिक प्रविधिसहित आएका विभिन्न देशका उद्धार टोलीसँगै सशस्त्रझैँ नेपाली...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...